သငျ့ အိမျရဲ့အဝငျအဝလေးကို ဒီလိုလေးစှဲဆောငျလို့ရတယျနျော - Home Decoration | iMyanmarHouse.com
13 Aug 2020 4:07 pm တွင် တင်ခဲ့သည်
541 ကြိမ် ကြည့်ရှု့ ပြီး
သငျ့အိမျကို လာလညျတဲ့ ခဈြရ၊ခငျရတဲ့ ဧညျ့သညျတှကေို ကိုယျ့အိမျလေးရဲ့ ထူးထူးခွားခွားပွငျဆငျထားတဲ့ ပုံစံလေးတှနေဲ့ မဆှဲဆောငျခငျြ ကွဘူးလား။ သူငယျခငျြး အပေါငျးအသငျးတှကွေား သငျ့အိမျလေးရဲ့အကွောငျး မှတျမှတျသားသားရှိဖို့နဲ့ ထူးခွားလှပတယျလို့ ခြီးမှနျးခံရဖို့ကတော့ လှယျလှယျ လေးပါပဲ။
ကိုယျ့အိမျရှတေံ့ခါးဝနားကို ရောကျရောကျခငျြးမှာပဲ အခုလိုမြိုး ထူးခွားတဲ့စိတျကူးလေးကို တှေးမိကွမှာမဟုတျပါဘူး။ အပနျးမကွီးလှပါဘူး။ အိမျ ရှတေံ့ခါးဝခွနေငျး ခွသေုတျခုံလေးတှကေို အခုလိုပဲ ပုံစံ၊ ဒီဇိုငျးမြိုးစုံပုံဖျောပွီး ပွငျဆငျထားလိုကျပါ။
သာမနျ WELCOME လို့ အဓိပ်ပါယျရတဲ့ခွသေုတျခုံ လေးတှမေဟုတျပဲ ထူးထူးခွားခွားနဲ့ အရောငျစုံ၊ ပုံစံမြိုးစုံရှိတဲ့ ခွနေငျးပွား လေးတှကေ အိမျရဲ့ဝငျဝငျခငျြးမှာပဲ ဧညျ့သညျတှကေို စှဲဆောငျပေးနိုငျမှာပါ။
ဒါကွောငျ့မို့လို့ ဒီလိုမြိုးလေးတှကေို ကိုယျတိုငျကွိုးစားကွညျ့ဖို့အတှကျလုပျပုံလုပျနညျးလှယျကူတဲ့ နညျးလမျးလေးတှကေို မြှဝပေါရစေ….
၁။ အခုခတျေစားနတေဲ့ မျောဒနျဆနျဆနျ အရောငျတောကျတောကျ ဆေးရောငျလေးတှကေို အသုံးပွုပွီး မဉျြးကွောငျး၊ ထောငျ့၊ အကှကျ စသဖွငျ့ ပုံစံလေးတှကေို ခွနေငျးပွားတှမှေ ရေးဆှဲအလှဆငျလို့ရပါတယျ။
၂။ ရီစရာအရုပျပုံလေးတှေ၊ သဈသီးပုံလေးတှကေိုလညျး အရောငျစုံရေးဆှဲပွီး ပွုလုပျနိုငျပါတယျ။
၃။ မိမိအိမျနဲ့ပတျသကျတဲ့ မိသားစု သင်ျကတေဖွဈဖွဈ၊ ဂဏ်ဍာနျးအက်ခရာဖွဈဖွဈ ရေးဆှဲလိုကျရငျလညျး ဆနျးကွယျပါတယျ။
၄။ ကွိုဆိုတဲ့ သင်ျကတေ HELLO နဲ့ နှုတျဆကျတဲ့ သင်ျကတေ BYE BYE စတဲ့ စာလုံးလေးတှကေို လားရာအတိုငျး ရေးသားထားမယျဆိုရငျလညျး သာမနျထကျပိုထူးခွားနိုငျပါတယျ။
၅။ နောကျပွီး အိမျရဲ့ အဝငျလြှောကျလမျးနရောမှာ တဈခုထကျ မကတဲ့ ရောငျစုံခွနေငျးပွားလေးတှေ ခငျးပေးလိုကျမယျဆိုရငျလညျး သငျ့အိမျလေး ထဲကိုဝငျဖို့ စိတျလှုပျရှားကွပါလိမျ့မယျ။
သင့် အိမ်ရဲ့အဝင်အဝလေးကို ဒီလိုလေးစွဲဆောင်လို့ရတယ်နော်
သင့်အိမ်ကို လာလည်တဲ့ ချစ်ရ၊ခင်ရတဲ့ ဧည့်သည်တွေကို ကိုယ့်အိမ်လေးရဲ့ ထူးထူးခြားခြားပြင်ဆင်ထားတဲ့ ပုံစံလေးတွေနဲ့ မဆွဲဆောင်ချင် ကြဘူးလား။ သူငယ်ချင်း အပေါင်းအသင်းတွေကြား သင့်အိမ်လေးရဲ့အကြောင်း မှတ်မှတ်သားသားရှိဖို့နဲ့ ထူးခြားလှပတယ်လို့ ချီးမွန်းခံရဖို့ကတော့ လွယ်လွယ် လေးပါပဲ။
ကိုယ့်အိမ်ရှေ့တံခါးဝနားကို ရောက်ရောက်ချင်းမှာပဲ အခုလိုမျိုး ထူးခြားတဲ့စိတ်ကူးလေးကို တွေးမိကြမှာမဟုတ်ပါဘူး။ အပန်းမကြီးလှပါဘူး။ အိမ် ရှေ့တံခါးဝခြေနင်း ခြေသုတ်ခုံလေးတွေကို အခုလိုပဲ ပုံစံ၊ ဒီဇိုင်းမျိုးစုံပုံဖော်ပြီး ပြင်ဆင်ထားလိုက်ပါ။
သာမန် WELCOME လို့ အဓိပ္ပါယ်ရတဲ့ခြေသုတ်ခုံ လေးတွေမဟုတ်ပဲ ထူးထူးခြားခြားနဲ့ အရောင်စုံ၊ ပုံစံမျိုးစုံရှိတဲ့ ခြေနင်းပြား လေးတွေက အိမ်ရဲ့ဝင်ဝင်ချင်းမှာပဲ ဧည့်သည်တွေကို စွဲဆောင်ပေးနိုင်မှာပါ။
ဒါကြောင့်မို့လို့ ဒီလိုမျိုးလေးတွေကို ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားကြည့်ဖို့အတွက်လုပ်ပုံလုပ်နည်းလွယ်ကူတဲ့ နည်းလမ်းလေးတွေကို မျှဝေပါရစေ….
၁။ အခုခေတ်စားနေတဲ့ မော်ဒန်ဆန်ဆန် အရောင်တောက်တောက် ဆေးရောင်လေးတွေကို အသုံးပြုပြီး မျဉ်းကြောင်း၊ ထောင့်၊ အကွက် စသဖြင့် ပုံစံလေးတွေကို ခြေနင်းပြားတွေမှ ရေးဆွဲအလှဆင်လို့ရပါတယ်။
၂။ ရီစရာအရုပ်ပုံလေးတွေ၊ သစ်သီးပုံလေးတွေကိုလည်း အရောင်စုံရေးဆွဲပြီး ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
၃။ မိမိအိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ မိသားစု သင်္ကေတဖြစ်ဖြစ်၊ ဂဏ္ဍာန်းအက္ခရာဖြစ်ဖြစ် ရေးဆွဲလိုက်ရင်လည်း ဆန်းကြယ်ပါတယ်။
၄။ ကြိုဆိုတဲ့ သင်္ကေတ HELLO နဲ့ နှုတ်ဆက်တဲ့ သင်္ကေတ BYE BYE စတဲ့ စာလုံးလေးတွေကို လားရာအတိုင်း ရေးသားထားမယ်ဆိုရင်လည်း သာမန်ထက်ပိုထူးခြားနိုင်ပါတယ်။
၅။ နောက်ပြီး အိမ်ရဲ့ အဝင်လျှောက်လမ်းနေရာမှာ တစ်ခုထက် မကတဲ့ ရောင်စုံခြေနင်းပြားလေးတွေ ခင်းပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်း သင့်အိမ်လေး ထဲကိုဝင်ဖို့ စိတ်လှုပ်ရှားကြပါလိမ့်မယ်။
အိမ်ခြံမြေ သတင်းများကို Email ဖြင့် ဖတ်ရန်
Email (သို့) Gmail
ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ကွမ်းခြံ ( * ) လမ်း တွင် အကျယ် 12.5*45 ပေ...
ပွညျ လမျးမကွီး ၈မိုငျလမျးဆုံ တိုကျခနျးကယျြ...
4.10 သိနျး (ကပျြ)
495 သိနျး (ကပျြ)
လှိုငျသာယာ | ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီး
1 ခနျး4ခနျး